Ka dib guushii baahinteedii ugu horreysay ee in ka badan 41 oo diiwaangelin ah, MOOC “Elles font l'art” ayaa dib u furmaysa!
Koorsadan khadka tooska ah ee bilaashka ah, oo u furan dhammaan, oo ka kooban muuqaallo, su'aalo iyo waxqabadyo, ayaa u heellan haweenka fanaaniinta laga bilaabo 1900 ilaa maanta. Farshaxanno muuqaal ah, sawir-qaadayaal, sawir-qaadeyaal, sawir-qaadayaal ama jilayaal dhammaan jinsiyadaha, waxay sameeyeen ama weli sameynayaan fannaankii qarniyadii 20-aad iyo 21-aad.
Safar taariikhi ah, waxaanu kugu martiqaadaynaa inaad ogaato taariikh kale oo farshaxan casri ah iyo mid casri ah oo u heellan hal abuurayaasha haweenka. Tani waa hab cusub oo loogu talagalay Xarunta Pompidou si ay si adag u xaqiijiso go'aankeeda haweenka, iyo taageeridda sinnaanta jinsiga.
MOOC Waxay sameeyaan farshaxan Diisambar 10, 2021Tranquillus
READ “Kala guurka wadajirka ah”: dib u tababbarka dariiqa lagu beddelayo shaqooyinka
horeBarnaamijka shayga Immersive ee Pharo
socdaAasaaska acoustics: codka dhammaan noocyada
Shaqaalaha ku jira fasaxa dhaqdhaqaaqa waxay ka faa'iideysan karaan nidaamka Kala-guurka Wadajirka ah